IMEX America no hetsika iraisam-pirenena voalohany nisokatra taorian'ny fandrarana ny fitsangatsanganana amerikana
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny indostria fihaonana » IMEX America no hetsika iraisam-pirenena voalohany nisokatra taorian'ny fandrarana ny fitsangatsanganana amerikana
Airlines • Airport • Associations News • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao momba ny indostria fihaonana • fivoriana • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
IMEX America no hetsika iraisam-pirenena voalohany nisokatra taorian'ny fandraràna ny fitsangatsanganana amerikana.
Roa herinandro latsaka kely sisa no handehanany amin'ny IMEX America, mpividy eran-tany an-jatony maro, mpanao fampirantiana ary matihanina amin'ny indostria no nanamafy ny fanatrehany.
Mpividy eran-tany maherin'ny 3,000 no voasoratra anarana hanatrika ny IMEX America.
Orinasa fampirantiana maherin'ny 2,200, avy amin'ny toerana, toerana, vondrona hotely ary mpamatsy teknolojia, no voamarina ihany koa.
Ny fiverenana ho an'ny indostria dia antony fanampiny amin'ny fankalazana amin'ny hetsika hariva, anisan'izany ny Site Nite atao ao amin'ny Resorts World vaovao, ny hetsika Rendezvous sonia nataon'ny MPI Foundation ao Drais ary ny EIC Hall of Leaders ao amin'ny MGM Grand.
"Amerika IMEX no hetsika iraisam-pirenena voalohany misokatra rehefa miala ny fandrarana ny fitsangatsanganana any Etazonia amin'ny 8 Novambra, ary amin'ny fampivondronana ampahany lehibe amin'ny vondrom-piarahamonina hetsika ara-barotra manerantany sy amerikana amin'ny fampisehoana, manantena izahay fa hanokatra ny lalana ho an'ny fanavaozana ny sehatra sy fahasitranana.” Carina Bauer dia miandrandra ny IMEX America, hatao ny 9 – 11 Novambra any Las Vegas.
Amin'ny tapa-bolana latsaka kely sisa Amerika IMEX, mpividy, fampirantiana ary matihanina amin'ny indostria an-jatony maro izao no nanamafy ny fanatrehany.
Mpividy manerantany maherin'ny 3,000 no voasoratra anarana hanatrika izany.
Nitarina ny laharan'ny fampirantiana
Ny fanambarana fitsangatsanganana amerikana vao haingana dia nanamafy ny fisian'ny Eoropeana tamin'ny seho avy amin'ny fampirantiana toa an'i Holland, Ireland, Italia, Scotland, Scandinavia ary Espaina. Manodidina ny vazan-tany efatra ny gorodona misy an'i Aostralia, Korea, Japon, Nouvelle Zélande ary Singapour eo anivon'ireo firenena Azia-Pasifika, miaraka amin'ireo lanja mavesatra eran-tany toa an'i Dubai, Maraoka ary Afrika Atsimo. Manatevin-daharana an'i Etazonia, Kanada ary Amerika Latina izy ireo mba hamoronana fiaraha-miasa iraisam-pirenena. Malaza ireo toerana eran-tany ireo, miaraka amin'ny fandaharam-potoanan'ny fampirantiana maro no feno haingana taoriana kelin'ny nandehanan'ny diary.
Ny faritra Tech Hub amin'ny gorodona fampisehoana dia iray amin'ireo lehibe indrindra hatramin'izay, mampiseho orinasa teknolojia midadasika ary maneho ny haingana ny fivoaran'ny sehatra tao anatin'ny roa taona lasa. Ny orinasa dia ahitana Aventri, Bravura Technologies, Cvent, EventsAir, Fielddrive BV, Hopin, MeetingPlay, RainFocus ary Swapcard.
Ny lalana mankany amin'ny helodranon'i Mandalay
Nantsoina ho 'fody ho an'ny indostria', ny seho amin'ity taona ity dia natao ho fihaonana manokana: tsy ny andiany faha-10 amin'ny Amerika IMEX, manana trano vaovao ihany koa ny fampisehoana – Mandalay Bay. Nahafahan'ny ekipan'ny IMEX hijery vaovao ny endriky ny seho sy hampiditra endri-javatra miavaka sasany izay manararaotra Mandalay Baymahasarika sy manatsara ny traikefan'ny mpanatrika. Ny iray amin'ireo dia ny 'Relaxation Reef, izay hampiantrano fandaharana hetsika ara-pahasalamana ao amin'ny Shark Reef Aquarium ao amin'io toerana io, fonenan'ny biby an-dranomasina maherin'ny 2,000. Ny sasany amin'ireo fotoam-pianarana maimaim-poana amin'ny seho dia hatao any amin'ny faritra ivelan'ny Helodranon'i Mandalay.
Fianarana natao ho an'ny sehatra rehetra
Tsy adino ny fandaharam-pianarana manentana sy maimaim-poana mandritra ny seho, ary hanomboka amin'ny Smart Monday, ampiasain'ny MPI, hatao ny 8 Novambra, ny ampitson'iny. Amerika IMEX manomboka. Dr Shimi Kang avy ao amin'ny Oniversiten'i British Columbia dia hanolotra ny lahateny Smart Alatsinainy, mampiseho ny fomba fikarohana farany mifototra amin'ny fampifanarahana, ny fanavaozana, ny fiaraha-miasa ary ny fahombiazan'ny orinasa maharitra.
Ny fivoriana natokana ho an'ny vondrona indostria isan-karazany dia ahafahan'ny mpanatrika manokana ny traikefany amin'ny Alatsinainy Smart. Misy ny fanabeazana sy ny tambajotra manokana ho an'ny mpitantana orinasa ao amin'ny Executive Meeting Forum - natao ho an'ny tompon'andraikitra ambony amin'ny orinasa Fortune 2000 - ary ny Focus Corporate vaovao - misokatra ho an'ny planner rehetra avy amin'ny orinasa amin'ny ambaratonga rehetra. Ny mpitarika ny fikambanana dia afaka mifandray sy mianatra amin'ny namany ao amin'ny Association Leadership Forum, noforonin'ny ASAE.
Isan'andro dia manomboka amin'ny MPI keynote. Ireo mpihetsiketsika sy mpihetsiketsika avy any ivelan'ny indostrian'ny hetsika ara-barotra dia samy hitondra ny fomba fijeriny an'izao tontolo izao amin'ny fampisehoana, anisan'izany ny mpanorina ny hetsika dihy manerantany sy ny fiarahamonina.
Ny Inspiration Hub dia trano iray indray hanehoana fampianarana ambony, manolotra fandaharam-potoana feno momba ny fahafahana mianatra mamaly ny filan'ny orinasa sy ny fepetra takian'ny fahaiza-manao izay mamaritra ny faramparan'ny taona 2021. Mandrakotra ny Famoronana eo amin'ny fifandraisana; Fahasamihafana sy fahafahana miditra; Fanavaozana sy teknolojia; Fanarenana ny orinasa, fifampiraharahana amin'ny fifanarahana, marika manokana ary maharitra.
Mankalaza ny fiverenan'ny indostria
Raha ivon'ny fandraharahana sy fianarana ny gorodona fampisehoana, dia mitohy manerana an'i Las Vegas ny traikefa IMEX America. Ny fitsangatsanganana bespoke dia manome ny ambany indrindra amin'ny tanàna na sakafo faran'izay tsara indrindra, traikefa mistery na lalana anatiny amin'ny toerana roa malaza: ny Lapan'i Caesar sy ny Bay Mandalay. Ny fiverenana ho an'ny indostria dia antony fanampiny amin'ny fankalazana amin'ny hetsika hariva, anisan'izany ny Site Nite atao ao amin'ny Resorts World vaovao, ny hetsika Rendezvous sonia nataon'ny MPI Foundation ao Drais ary ny EIC Hall of Leaders ao amin'ny MGM Grand.
IMEX America dia atao ny 9 - 11 Novambra ao amin'ny Mandalay Bay any Las Vegas miaraka amin'ny Smart Monday, powered by MPI, ny 8 Novambra.